I-China Magic 5CM Grips Cover Elastic Adhesive Covers Banokubulawa kweTattoo Grip Bandage Manufacture kunye neFektri | MOLONG
Umlingo we-5CM Grips Cover Elastic Adhesive Covers Ezilahlwayo zeTattoo Grip Bandage
Isimbo sokubamba umvambo womlingo / ibhandeji
Iintshayelelo: I-5.0CM GRIP COVER, isuti kubo nabuphi na ubungakanani, nasiphi na isitayile sokubambelela Imibala emininzi ikhoyo. xa u-odola, nceda usishiye yeyiphi imibala oyithandayo. Ukusetyenziswa kokulahla, ukhuseleko, impilo, okusingqongileyo, ukuhlala kamnandi! Umsebenzi ulula, kulula ukuyisebenzisa, wonke umntu angayiphatha.
Izinto eziphathekayo Amalaphu Non ephothiweyo
Umbala Bomvu, Luhlaza, Mnyama, Luhlaza, Sifihle
Iglu ILatex okanye iLatex-yasimahla
Uphawu Flexible, ayisindi
Ukusetyenziswa Ingasongelwa ngokubamba umvambo
Ubukhulu: 2.5 cm (0.5 intshi), 5 cm (1 intshi)
Ubude obandisiweyo: 4.5 yeemitha
Ukupakisha: 24pcs kwibhokisi nganye, 12box ibhokisi nganye, 288pcs ibhokisi nganye
Isixhobo: Ilaphu elikhethekileyo elingalukwanga.
Fuction: Isimbo sokubambela sembambo esongelayo sinokusongelwa kumqheba wokubamba womatshini we tattoo
Inzuzo: i-self-adhesive, kulula ukusonga kwiipeni zokubhala umvambo, i-SS tattoo kunye nokubamba okulahlwayo. Yenza ukubambelela nakubuphi na ubungakanani obuthandayo, kwaye ukhululeke ekuphatheni imvakalelo.
Isibonelelo sethu sokubambelela kwitheyiphu:
1.Umgangatho olungileyo, izinto eziphezulu kunye nobude obude obude.
2. xabiso elikhulu. ndibuze, uya kumangaliswa.
3. ukhetho olwenziwe ngokwezifiso. Ibhokisi eyenziwe ngokwezifiso, ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso, i-oppbag eyenziwe ngokwezifiso,
I-OEM engundoqo eyenziwe ngokwezifiso (i-logo yokuprinta) .Senza i-OEM kubanikezeli abaninzi be tattoo.
Ukubamba ii-bandage zokubambelela endaweni. I-bandage yokucinezela ebambekayo ebambelela kuyo, hayi kwezinye izinto okanye ulusu. NGAPHANDLE kokusetyenziswa kweziqwengana okanye izinto zokubopha.
Ukudityaniswa kweTattoo Grip Cover Wraps kukufaka umbala kwiikhowudi zakho kunye nokusonga.
Ezi ziQinisekiso eziQinisekisiweyo zaKho zilula, ibhokisi eyi-1 ibandakanya imiqolo eli-12 yee-2 ″ ububanzi ezibopha iibhandeji eziyi-4.5M ubude
Umbala: camo eluhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka obomvu oxubileyo. Nceda uqaphele: thumela imibala ngokungacwangciswanga.
UKUSETYENZISWA KWEZINTO NGOKUGQITHISILEYO-Isimbozo sokubamba umvambo singasongelwa kumatshini wokubamba womatshini we tattoo. Uncedo lokuthintela isiliphu sokuphatha kunye nokwenza imifanekiso yobugcisa egqibeleleyo. Inokusetyenziselwa ukukhusela amalungu amaninzi omzimba.
Egqithileyo 30mm Umbala weGradient Umbala oLungelelanisiweyo weTattoo Cartridge Grip
Okulandelayo: Ukujikeleza umva isitulo sekhompyuter isitulo sekhompyutha ubuhle besaluni isitulo somzi ukuphakamisa isitulo sebar ejikelezayo
Iswitshi entsha yeTattoo yeenyawo
Umatshini wokujikeleza iTatoo yeHammer (Imoto engenanto)
Ukubonelela ngombane oMbane oMbane oSebenzayo oSebenzayo oMbane oMbiweyo
I-Hummingbird Iibhubhu zeTattoo ezilahlwayo 25MM